Etu esi agba ọsọ n'asọmpi Facebook (Nzọụkwụ Nzọụkwụ) | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 17, 2019 Tọzdee, Disemba 17, 2019 Douglas Karr
Asọmpi Facebook bụ ngwa ahịa azụmaahịa. Ha nwere ike bulie mmata nke ọma, bụrụ isi iyi nke ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara, mee ka ndị na-ege ntị tinye aka, ma mee mgbanwe dị ịrịba ama na ntụgharị gị.
Na-agba ọsọ a ịga nke ọma na-elekọta mmadụ media zoo abụghị ọrụ dị mgbagwoju anya. Mana ọ chọrọ ịghọta ikpo okwu, iwu, ndị na-ege gị ntị na ịme atụmatụ doro anya.
Da dị ka mbọ dị ukwuu maka ụgwọ ọrụ ahụ?
Asọmpi a haziri nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma nwere ike ịme ebube maka ụdị.
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị n’ịgba asọmpi Facebook, nke a bụ usoro a-otu usoro ị ga-esi mee mkpọsa na-aga nke ọma.
Kwụpụ 1: Kpebie ihe mgbaru ọsọ gị
Ọ bụ ezie na asọmpi Facebook dị ike, ikpebi kpọmkwem ihe ịchọrọ na asọmpi gị ga - enyere gị aka ịghara ịchọpụta etu ndị mbata ga-esi debanye aha, ihe nrite ị ga-enye, yana otu esi agbaso mgbe mkpọsa ahụ gasịrị.
Ihe mgbaru ọsọ dị iche iche nwere ike ịgụnye:
Asingbawanye iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
More okporo ụzọ na saịtị
Increbawanye ama ama
More na-elekọta mmadụ media na-eso ụzọ
Ezubere nke ọma Asọmpi Facebook nwere ike inyere gị aka kụrụ ihe karịrị otu ebumnuche, mana ọ na-adị mma mgbe niile inwe echiche bụ isi tupu ịmalite mkpọsa gị.
Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ihe ọ bụla - usoro ntinye, iwu, imewe, ihe nrite, nnomi na ibe - buru ebum n'uche gị n'uche ma tinye ya na nke ahụ.
Nzọụkwụ 2: Nweta nkọwa ahụ! Ndị na-ege ntị n’ùche, mmefu ego, Oge.
Ekwensu nọ na nkọwa mgbe ọ bịara ịlụ ọgụ.
N'agbanyeghị otu ihe dị mma gị na-agbata n'ọsọ ma ọ bụ etu nnukwu mmefu ego gị si dị, ma ọ bụrụ n 'ị na-echeghị site na ntọala gị, ọ ga-efu gị nnukwu oge n'okporo ụzọ.
Tọọ a mmefu ego ọ bụghị naanị maka ihe nrite gị, kama maka oge ị ga-etinye na ya, ego ole ị ga-eji kwalite ya (n'ihi na ọ ga-achọ nkwalite iji wepụta okwu ahụ), yana ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ịntanetị ị ' Aga m iji nyere aka.
Oge oge bu igodo.
N'ikwu okwu n'ozuzu, asọmpi ndị na-erughị otu izu anaghị adaba na ha ga-enwe ike kachasị tupu ha akwụsị. Asọmpi ndị na-ewe ogologo oge karịa ọnwa abụọ na-egbochi peter ma ndị na-eso ụzọ kwụsị inwe mmasị ma ọ bụ chefuo.
Dị ka usoro isi mkpịsị aka n'ozuzu, anyị na-atụ aro ịkwado asọmpi maka izu 6 ma ọ bụ ụbọchị 45. Nke ahụ yiri ka ọ bụ ebe dị ụtọ n'etiti inye ndị mmadụ ohere ịbanye, na ịghara ikwe ka asọmpi gị kwụsị ma ọ bụ kwụsị mmasị.
N'ikpeazụ, chee maka mkpa oge. Dị ka ihe atụ, inye onyinye n’elu mmiri anaghị enwekarị ike ịdọta ndị bịara n’oge oyi.
Nzọụkwụ 3: Condị Asọmpi Gị
Ofdị asọmpi dị iche iche kachasị mma maka ụdị ebumnuche dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, iji nweta ọdịnaya ndị ọrụ na-eme, asọmpi foto bụ nzọ gị kachasị mma.
Maka anatara email, ngwa-ngwa-ekpochapụ ọsọ bụ ndị kasị dị irè. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite njikọ aka, ịgba ọsọ n'asọmpi bụ ụzọ na-atọ ụtọ iji mee ka ndị otu na-ege gị ntị nwere ọgụgụ isi na-egwu egwuregwu gị.
Maka echiche, nke a bụ ụdị asọmpi ole na ole ị nwere ike ịgba ọsọ:
Ntuli aka votu
Mkparịta ụka Caption Photo
Kwụpụ 4: Kpebie Yourzọ Ntinye Gị na Iwu Gị
Nke a ga-adị oke mkpa, ebe enwere ihe ole na ole na-eme ka ndị ọrụ kwụsị ọrụ karịa iche na a ghọgburu ha n'asọmpi n'ihi na ha aghọtaghị iwu ahụ.
Ndị mbata na-enwe nkụda mmụọ nwere ike imebi ọnọdụ egwuregwu nke asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta, yana nwedịrị ike ịdebanye ihe egwu dị na iwu ma ọ bụrụ na ekwughị ya n'ụzọ ziri ezi.
Ihe ọ bụla usoro ntinye ma ọ bụ iwu - ịbanye site na email, Likmasị ibe gị, ịnyefe foto yana nkọwa, ịza ajụjụ - hụ na edere ha nke ọma ma gosipụta nke ọma ebe ndị nabatara nwere ike ịhụ.
Ọ na - enye aka ma ọ bụrụ na ndị ọrụ mara etu a ga - esi họrọ ndị mmeri, yana ụbọchị ha nwere ike ịtụ anya na a ga - agwa ha (ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe nrite ahụ buru ibu, ị ga - ahụ na obodo nwere ike ịnụ ụjọ ịnụ ọkwa onye mmeri.)
Ọzọkwa, hụ na ị na-agbaso iwu na ụkpụrụ nduzi ọ bụla. Facebook nwere setịpụ ụkpụrụ maka asọmpi na nkwalite n'elu ikpo okwu ya. Ọmụmaatụ, ị ga-ekwupụta n'ụzọ doro anya na gị Onweghi nkwado akwadoro, kwadoro, jikwaa ma ọ bụ jikọtara ya na Facebook.
Lelee iwu na atumatu maka adịghị ike ndị ọzọ, ma gbaa mbọ hụ na ị gbasoro ụkpụrụ ọhụrụ ọhụụ tupu ị malite.
Ngwa ọsọ: Maka enyemaka iji mepụta iwu asọmpi, lelee Wishpond's free zoo iwu generator.
Kwụpụ 5: Họrọ Nrite Gị
I nwere ike iche na ihe nrite gị ga-akarị ma ọ bụ trendier, nke ka mma, mana nke ahụ abụchaghị otu.
N'ezie, ka ihe nrite gị dị oke ọnụ, ọ ga-abụ na ọ ga-adọta ndị ọrụ ga-abanye asọmpi gị maka ihe nrite ahụ, ma ghara itinye aka na akara gị mgbe asọmpi ahụ gasịrị.
Kama nke ahụ, ọ ka mma ịhọrọ ihe nrite nke kwekọrọ n'ụdị gị: ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke gị, ma ọ bụ ịzụ ahịa n'ụlọ ahịa gị. Nke a ga - apụta na ị ga - enwerịrị ndị ga - abata nwere ezigbo mmasị n’ihe ị ga - enye.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ akara ngosi mara mma na-enye iPhone kachasị ọhụrụ maka inyefe ego, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ndị mbata, ikekwe karịa ma ọ bụrụ na ị na-enye nnwere onwe n'efu ma ọ bụ ndụmọdụ.
Mana ole n'ime ndị na-abanye site na nke mbụ nwere ike ịnọrọ ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị debanyere aha mgbe onyinye gị gafere, ma ọ bụ nwee ike ịghọ ndị ahịa ogologo oge?
Ọ dị mfe dọpụ uche gị site na nnukwu ọnụ ọgụgụ na nnukwu ihe nrite, mana echiche echepụtara bụ ụzọ kachasị mma iji nweta asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta - nnukwu abụghị ihe ka mma mgbe niile, mana mkpọsa ezubere iche na echiche echebara echefu.
Maka ịgụkwu banyere ịhọrọ ihe nrite gị, gụọ:
Ebumnuche Nrite 101 kacha mma iji nyefee na asọmpi na asọmpi n'ịntanetị
Ego 50 Ego Onyinye Ego I Nwere Ike Iji Taa
5 Ngwunye Ngwá Ego Na-akwụ Ọnụ Dị Ego Na-agbaghara Nsogbu
Nzọụkwụ 6: Mbido, Mbido & Nkwalite!
Nke a ahia ahia kwesiri itinye oghere maka ịkwalite asọmpi ahụ.
Maka mmetụta kachasị, ndị na-ege ntị kwesịrị ịma maka asọmpi ahụ ntakịrị tupu ha ebido, na-atụ anya, na-enwe obi ụtọ banyere ohere ịbanye ma merie.
Ebumnuche maka nkwalite gụnyere:
Izipu akwụkwọ ozi email nke ndị debanyere aha gị
Kwalite asọmpi gị na sidebars ma ọ bụ popups na weebụsaịtị gị
Nkwalite na ntanetị mgbasa ozi
Ozugbo asọmpi gị ga-adị ndụ, nkwalite gị kwesịrị ịga n'ihu na-aga n'ihu oge ahụ!
Downgụ oge na-enyere gị aka ibido ịdị nso nke ụbọchị, yana ichetakwara ndị mmadụ ihe nrite na uru ọ bara.
Maka ihe ọzọ, gụọ Wzọ asaa iji bulie asọmpi Facebook gị nke ọma.
Kwụpụ 7: Were ndetu
Dị ka ọ dị n'ihe ọ bụla, ụzọ kachasị mma iji nwee ọfụma n'ịsọ asọmpi bụ ị banye ebe ahụ wee bido ime ya: mụta ihe n'aka ndị na-ege gị ntị na ndị otu gị ihe kacha arụ ọrụ maka gị na ihe anaghị arụ ọrụ.
Detuo ihe n'usoro na ebe ị ga - emeziwanye ka ị ghara ikwughachi otu ihe ugboro ugboro.
Na ikpeazụ, ma ọtụtụ ihe - nwere fun! N'asọmpi a na-agba ọsọ nke ọma, ndị na-ege gị ntị na-etinye aka, gị onwe gị kwa kwesịrị ịdị. Kporie ndị na - eso ụzọ ọhụrụ gị na nọmba ọhụrụ gị: ị nwetara ya!
Na-eche n'ike mmụọ nsọ? Thedị asọmpi ị na-enweghị njedebe: vidiyo, foto, ntinye aka, isi na ndị ọzọ. Na-eche n'ike mmụọ nsọ? Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Wishpond maka ihe ndị ọzọ! Sọftụwia ahịa ha na-eme ka ọ dịrị mfe ịmepụta na ịgba ọsọ asọmpi na-aga nke ọma, yana soro nyocha na njikọ aka.
Tags: asọmpi facebook